Nasaina aho hankalaza ny ‘Andron’i Colomb’. Toy izao no navaliko · Global Voices teny Malagasy
Tsy misy antony ankalazana ny fahatongavan'i Christophe Colomb ho anay
Voadika ny 25 Oktobra 2021 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, 日本語, Italiano, Français, Español
Andro fanoherana ho an'ny indizeny, mainty hoditra sy malaza. Sary nataon'i Carlos Lara
Nahazo fanasana avy amin'ny Masoivohon'i Espaina ao amin'ny fireneko, El Salvador, aho ny 5 Oktobra, hankalaza ny Fetim-pirenen'i Espaina amin'ny 12 Oktobra. Nasaina hanatrika ny fampisehoana ataon'ny amboaram-peon-java-maneno El Salvador ao amin'ny Teatro de San Salvador aho, fampisehoana izay karakarain'ny Ministeran'ny Kolontsaina ihany koa. Fa ho ahy kosa dia tsy misy tokony ho ankalazaina amin'io andro io.
Nandritra ny taona maro, nankalazaina tany Espaina sy Amerika Latina ho “Día de la Raza” (Andron'ny Firazanana) ny 12 Oktobra, fantatra amin'ny anarana hoe “Andro Espaniola” na “Fetim-pirenen'i Espaina” hatramin'ny taona 1987 ary any Etazonia kosa antsoina hoe Andron'i Colomb. Tamin'ny 12 Oktobra 1492 dia nahita tany i Christophe Colomb ary tonga tany amin'ny nosy Karaiba Guanahaní. Mankalaza ilay antsoina hoe “fahitana” an'i Amerika sy ny “fifanakalozana” kolontsaina, fiteny ary fivavahana ny olona sasany fa tsy manaiky ny toerana misy azy ireo. Ho anay, indizeny, vahoaka mainty hoditra sy taranaka afrikana izay novonoina sy nandevozina, ary manohitra hatrany ny vokatry ny fanjanahana vaovao, dia tsy misy tokony hankalazana ny fahatongavan'i Christophe Colomb.
Noho izany, niova ho Andro fanoherana ho an'ny mainty hoditra, indizeny sy malaza tany amin'ny firenena maro, ny andro fankalazana ny fanafihana. Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny fikambanana Salvadoreana ho an'ny Indizeny sy Taranaka Afrikana anay dia manatevin-daharana izany fahatsiarovana izany sy ny fanomezana an'io anarana io izahay, satria maneho ny dikan'io daty io izany ho anay rehefa saintsaininay ny vokatry ny fahatongavan'ireo Eoropeana tao amin'ny faritra antsoina hoe Amerika ankehitriny sy ny voka-dratsy izay mbola mahakivy hatrany ny mponina-anay.
Toy izao ny valiny nalefako tany amin'ny Masoivoho, milaza amin'ny antsipiriany ny toerako, tohanan'ny AFROOS (Fikambanan'ny Taranaka Afrikana Salvadoreana) sy ny olona maro hafa izay mahatsapa tena toa ahy ihany koa:
San Salvador, 8 Oktobra 2021
Atoa Ambasadaoro solontenan'ny governemantan'i Espaina eto El Salvador.
Voaraiko ny fanasanao hanatrika ny fankalazana ny ‘Fetim-pirenen'i Espaina’ amin'ny 12 Oktobra hoavy izao ao amin'ny Teatira Nasionaly ao San Salvador.
Rehefa naharay izany aho dia tsy azoko ihodivirana ny fahatsapako ho tsy mahazo aina sy ny faniriako hilaza valiny izay antenaiko fa horaisinao am-panajana sy am-pahamatorana.
Olona eo am-pankatoavana sy am-panavotana ny lova afrikana sy ny indizeny aho, na amin'ny fomba manokana, na iarahana ary ara-kolontsaina aho. Ao anatin'ny fikambanana iray miasa hamongorana ny fanavakavaham-bolon-koditra izay miseho isan'andro eto amin'ny firenentsika vokatry ny taonjato nampanorenana sy nampiatìna hatramin'ny 12 Oktobra 1492 aho. Ity daty ity dia nankalazaina tamim-pireharehana isan-taona ary nanana anarana samy hafa, toy ny hoe: “Andro Espaniola”, “Andron'ny Firazanana” ary, nanomboka ny taona 1987, “Fetim-pirenen'i Espaina” – izay fanesoana sy fanafintohinana ho an'ireo vahoaka indizeny ao amin'ny faritra antsoina ankehitriny hoe Amerika sy ho an'ireo vahoaka Afrikana izay nandevozina hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16. Noho izany, firenena maro no nanova ny anarana sy ny dikan'io daty io, hitakiana ny hasin'ny vahoakanay Indizeny.
Tiako hazava tsara fa tsy maneho fankahalana na fandavana aho, ary tsy midika ihany koa izany fa nitsahatra ny fankatoavako ireo fandraisana anjara ara-kolontsaina ataon'ireo vahoakanareo izay ao anatin'ny fiainana andavanandron'ny firenentsika ankehitriny. Kanefa, ekeko fa anisan'ny fitohizan'ilay fanavakavaham-bolon-koditra izay iainan'ny vahoakanay indizeny sy ireo taranaka Afrikana ny fankalazana ny daty toy izany, sy ny fahafantarana ny antony. Tsy mamaha ny olana ny fanamarihana an'ity andro ity amin'ny tantara nefa tsy manakiana izany, fa ny mifanohitra amin'izany no mitranga dia ny fitohizany.
Nofinofiko ny andro hanesorana ireo sarivongan'i Colomb, Isabella ary Charles V tsy ho ao amin'ny lapan'ny firenena, ho mariky ny fanajana ireo vahoaka razambenay sy ny taranaka Afrikana. Ary, na dia marina aza fa tsy manarina ny simba izany, dia ampahany amin'ny fananganana tantara vaovao izay manome fahamendrehana an'ireo izay nesorina tamin'izany nandritra ny taonjato maro.
Tsy mandray valiny avy aminareo aho, raha tsy hoe angaha momba ny vaovao fa tsy hatao eto amin'ny firenentsika intsony ny fankalazana toy izany.